အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အမှား ၃ ချက် - fastforward
အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းအတွက် ရှောင်ကြဉ်ရမယ့် အမှား ၃ ချက်
ကိုယ့်အတွက်ရှိနေတဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအသာစီးရမှုကို နားမလည်ခြင်း
ကျွန်တော်/ကျွန်မရဲ့ အွန်လိုင်းဆိုင်ကနေ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးက လူတွေကို ရောင်းချင်တယ်။ လူများများသိမှ များများရောင်းရမှာပေါ့။
ဒါက မြန်မာနိုင်ငံမှာ လုပ်ငန်းရှင်တွေ တော်တော်များများ (e-commerce လုပ်ငန်းချဲ့ထွင်ပြီးသားဖြစ်စေ၊ အခုမှ စတင်ချင်တာပဲဖြစ်စေ) ပြောတတ်တဲ့ စကားကို ကြုံဖူးတာပါ။ လူတွေ တော်တော်များများထင်ကြသလို ငါးများများရချင်လို့ ပိုက်ကွန်ကြီးကြီးသုံးသလို eCommerce ကို သိမ်းကြုံးမှတ်ယူလို့မရပါဘူး။ ဒီလို လူတိုင်းကို ရောင်းတဲ့အခါ တကယ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ထက် ကျသွားတတ်ပါတယ်။ ဘာလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ?
ပြဿနာက လူတိုင်းအကြိုက်ကို လိုက်နိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်လို့ပါ။ လူတိုင်းမှာ အကြိုက်တွေကွဲပြားကြပါတယ်။ လူတိုင်းရဲ့အကြိုက်ကို လိုက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါ အကုန်လုံးရောသမမွှေထားလို့ ထင်ထင်ရှားရှားမှတ်မိနေတဲ့ အချက်ပျောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဆို ကိုယ်တိုင်လည်း ပြိုင်ဘက်တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာမှထူးခြားကွဲပြားနေတာမရှိတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်ထက် ပိုဈေးသက်သာပြီး ပိုလူသိများတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေရှိသလို မားကတ်တင်းအတွက် ငွေအများကြီးသုံးပြီး သုံးစွဲသူတွေကို ဆွဲဆောင်နေတဲ့ ပြိုင်ဘက်တွေလည်းအများကြီး ရှိပါတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မေးကြည့်ပါ – ကိုယ့်ရဲ့ ဒီ eCommerce ဝက်ဘ်ဆိုဒ်က ဘာတွေများထူးခြားနေလဲ။ ဘာလို လူတွေက ကိုယ့် eCommerce ဆီက ဝယ်သင့်သလဲ။ ဘယ်လိုလူတွေက ကိုယ့်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကနေ ဝယ်ကြမှာလဲ။ တကယ်လို့ ဒီ မေးခွန်း ၃ ခုစလုံးအတွက် ကိုယ့်မှာ အဖြေသေချာရှိပြီဆိုရင်တော့ လုပ်ငန်းအသာစီးရမှုနဲ့ စားသုံးသူတွေကို သေချာသတ်မှတ်ပြီးသွားလို့ စနစ်တကျရှိနေပြီလို့ဆိုလို့ရပါတယ်။ ဈေးဝယ်သူတွေက ကိုယ့်အွန်လိုင်းဆိုင်မှာပဲ ဝယ်ကိုဝယ်ရမယ့်၊ နောက်ထပ်လည်း ထပ်ဝယ်ချင်စေဖို့အတွက် ခိုင်မာတဲ့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်။ ကိုယ့်အွန်လိုင်းဆိုင်ကလွဲပြီး တစ်ခြားဘယ်ဆိုင်မှာမှမရနိုင်မယ့်၊ အလွယ်တကူမတုပနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးစွမ်းနိုင်တာက ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့အသာစီးရမှုပါ။
တကယ်လို့ ကိုယ့်အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းအတွက် လုပ်ငန်းအသာစီးရမှုနဲ့ စားသုံးသူတွေ သတ်သတ်မှတ်မှတ်မရှိသေးရင် ကိုယ့်လုပ်ငန်းရဲ့ အားသာချက်ကဘာလဲ။ ဘာလို့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက တစ်ခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ ကွာတာလဲဆိုတာ သုံးသပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ကိုယ့်အားသာချက်က တစ်ခြားဘယ်သူ့ဆီမှာမှ မရှိသေးတဲ့ ပစ္စည်းကို ရှိတာလား ဒါမှမဟုတ် သူများတွေထက် ဆိုင်လည်ပတ်မှုက ပိုပြီးထိရောက်မှုရှိတာလား စသဖြင့်ပေါ့။ ဖြည့်ပြောရရင်တော့ ဈေးကွက်သုတေသနလုပ်တာက ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲဆိုတော့
(၁) Target Audience က ကိုယ့်ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ရပြီး သူတို့အခက်အခဲတွေ ဖြေရှင်းနိုင်သွားလား
(၂) ကိုယ့် ပစ္စည်းနဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေကိုရောင်းတဲ့အခါ Target Audience ရဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှုရှိအောင် ပြောဆိုနေရဲ့လား။
(၃) ကိုယ့် Target Audience ရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ ရေးဆွဲထားတဲ့ မားကတ်တင်းနည်းဗျူဟာရှိရဲ့လား။
ဒီ (၃) ချက်အတွက် အဖြေရှိနေဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
လုံးဝကို ကွဲပြားနေတဲ့ လုပ်ငန်းအသာစီးရမှုရှိပြီး လူနည်းစုကို သေချာဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ရင်တော့ အချိန်တိုအတွင်းဖြစ်စေ၊ ရေရှည်ဖြစ်စေ ကိုယ့်အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းက တကယ်အလုပ်ဖြစ်မဖြစ်သိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအချက်နဲ့ ကိုယ့်လုပ်ငန်းက လုပ်ငန်းအမျိုးအစားတစ်မျိုးတည်းမှာ ထိုးဖောက်နိုင်မယ့်အပြင် ကိုယ့်ပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေလိုအပ်နေတဲ့ စားသုံးသူတွေကိုလည်း ထူးခြားထိရောက်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတွေ ပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်ချက်။ လူတိုင်းနဲ့စကားပြောနေတဲ့အခါ ဘယ်သူနဲ့မှ စကားပြောမနေဘူးဆိုတာ သတိရပါ။
စီမံကိန်းရေးဆွဲဖို့ လိုအပ်တဲ့အချိန်နဲ့ အင်အားတွေကို လျစ်လျူရှုခြင်း
အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းစတင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းအတွက် လမ်းစတွေအများကြီးဖွင့်ပေးနိုင်တာမို့လို့ စိတ်လှုပ်ရှားကောင်းတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းစတင်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ စီမံချက်တွေ ပစ္စည်းတွေ၊ လူအင်အားတွေမရှိဘဲ စတင်မိတဲ့အမှားကို ရှောင်နိုင်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းလုပ်တယ်ဆိုတာ လွယ်လွယ်လေးမဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ်ရောင်းချမယ့် platform ရဲ့နောက်ကွယ်မှာ လိုအပ်တာတွေ အကုန် ကြိုတင်ပလန်ဆွဲ၊ ပြင်ဆင်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံက လုပ်ငန်းတော်တော်များများလုပ်တတ်တဲ့အမှားတစ်ခုက ကိုယ်ပစ်မှတ်ထားချင်တဲ့ဈေးကွက် မသိခင်၊ ဝယ်လိုအားကို မသိခင်ကတည်းက ကြိုတင်ပြီး ပစ္စည်းတွေ ဖြည့်ထားတဲ့အတွက် ကုန်ပစ္စည်းအတွက် နေရာပြည့်နေပြီး ဝယ်မယ့်သူမရှိတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါတယ်။
များသောအားဖြင့် လုပ်ငန်းရှင်တွေက အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းကို အောင်မြင်စေမယ့် ပလန်ဆွဲတာနဲ့ လိုအပ်ချက်တွေကို လျစ်လျူရှုပြီး လုပ်ငန်းစချင်ကြပါတယ်။ လက်တွေ့မှာတော့ အွန်လိုင်းမှာလုပ်ငန်းစတင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်လုပ်ငန်းပုံစံတစ်ခုလုံးမှာ အခုအသစ်လုပ်မယ့် eCommerce ပုံစံကို ဝင်ဆံ့အောင်ပြောင်းလဲပစ်ပြီး တစ်သားတည်းဖြစ်အောင်လုပ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းရှိတယ်ဆိုတာနဲ့ ကိုယ်မျှော်မှန်းထားတဲ့ ပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ နည်းဗျူဟာလိုသလို ကိုယ့်အချိန်တွေ၊ လူအင်အားတွေ၊ ကုန်ပစ္စည်းတွေကို သေချာစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့လည်း ပလန်တွေရှိနေဖို့ ကအရေးကြီးပါတယ်။ ဒါဆို အောက်မှာ ဖော်ပြထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေအတွက် အဖြေရှိပြီလားဆိုတာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ပြန်မေးကြည့်ပါ။
ဘယ်လိုနည်းနဲ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပန်းတိုင်ကို ရောက်နိုင်မှာလဲ?
ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဘယ်နေရာမှာ အသာစီးရနိုင်မလဲ? သူများတွေထက် ဘာထူးခြားနေလဲ?
ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့အခက်အခဲကို ကိုယ့်လုပ်ငန်းက ဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးနိုင်မှာလဲ?
ကိုယ့်လုပ်ငန်းက နည်းဗျူဟာကို ဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မှာလဲ?
customer service ရဲ့ အရေးပါမှုကို လျစ်လျူရှုခြင်း
Customer Service သေချာလုပ်တာကြောင့် ကိုယ့် eCommerce မှာ အကျိုးအမြတ်အများကြီးရနိုင်တာကို လျှော့မတွက်မိဖို့ အရေးကြီးတယ်နော်။ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းရှိတာနဲ့ customer service ကောင်းကောင်းလုပ်စရာမလိုဘူးလို့ မတွေးပါနဲ့။ တကယ်ဆို အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းတွေက Customer Service ကို အပြည့်ဝဆုံးပေးထားရမှာပါ။
ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဈေးဝယ်သူတွေက ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းကို အမြဲပြန်လာဝယ်နေဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကိုလည်း eCommerce နဲ့ အကောင်းဆုံး ဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဈေးဝယ်သူတွေ သိချင်တာနဲ့ စိုးရိမ်တာတွေ အားလုံးကို ဖြေဆိုဖို့ အသင့်ရှိနေဖို့ က အဓိကပါ။ ချိုသာပျူငှာတဲ့ Customer service နဲ့ ကိုယ့် ဈေးဝယ်သူနဲ့ လုပ်ငန်းအကြား ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ဖို့ အခွင့်အရေးကောင်းပါ။ ဒါမှ ယုံကြည်အားကိုးလို့ရပြီး စိတ်ချရတဲ့ လုပ်ငန်းဖြစ်နိုင်မှာပါ။
Customer တွေကို Website မှာ Review ရေးခိုင်းတာကလည်း ဒီလိုယုံကြည်မှုတည်ဆောက်တဲ့နေရာမှာ အရေးပါပါတယ်။ ဈေးဝယ်သူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေပြောပြထားတဲ့ feedback နဲ့ review တွေက ကိုယ့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့အမှတ်တံဆိပ် အပေါ် ယုံကြည်မှုတိုးပွားစေပြီး သွယ်ဝိုက်တဲ့နည်းနဲ့ ရောင်းအားမြှင့်တင်ပေးရာလည်း ကျပါတယ်။
PrevPrevious5 ways to set up your business model for online success
Nextရက် (၃၀) အတွင်း အွန်လိုင်းဆိုင်ခန်းလေး ဖန်တီးနိုင်ဖို့Next
လက်ဆောင်ပေးဖို့အတွက် အိုင်ဒီယာများ ကိုယ်ချစ်ရ၊ ခင်ရတဲ့ မွေးနေ့ရောက်ရင် ဘာပေးရမလဲဆိုတာ ခေါင်းစားဖူးပါသလား? ကိုယ်ရဲ့ရင်းနှီးတဲ့သူငယ်ချင်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်၊ မိဘ၊ ဆွေမျိုး၊ မောင်နှမကိုပဲဖြစ်ဖြစ် လက်ဆောင်ပေးလို့ရအောင် လူကြိုက်များတဲ့လက်ဆောင်အမျိုးအစားအခု (၂၀) ကို စာရင်းလုပ်ပေးထားပါတယ်။ ယောကျ်ားလေးနဲ့ မိန်းကလေးအတွက် လက်ဆောင်ပေးလို့ရမယ့် အမျိုးအစားခွဲပြီးပြောပြပေးသွားပါမယ်။ ယောကျာ်းလေးတွေအတွက် လက်ဆောင်အမျိုးအစားများ ယောက်ျားတွေမွေးနေ့ဆိုရင် လက်ဆောင်ရတာရှားတတ်တာရှားတယ်။ မွေးနေ့လက်ဆောင်ကိုဘာလိုချင်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမပြောတတ်တော့